I-Persian Gulf: izici, umnotho, ukuhlukahluka kwemvelo nokubaluleka | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Namuhla sizokhuluma ngenye yezindawo okukhulunywa ngazo kakhulu emhlabeni eminyakeni edlule njengoba inenani elikhulu lemithombo yemvelo futhi iyindawo yochungechunge lwezingxabano ebelibaluleke kakhulu emlandweni womhlaba. Imayelana ne- I-Persian Gulf. Phambilini bekuyisifunda esinobukhulu obukhulu lapho imiphakathi ehlukene yayihlala khona. Namuhla ixhunyaniswe nempi ngenxa yezingxabano ezahlukahlukene ezenzeke lapha.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela zonke izici, umlando, imvelaphi kanye nezinsongo zePersian Gulf.
2 Amadolobha kanye namazwe ePersian Gulf
3 Izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo ePersian Gulf
4 Ukubaluleka kanye nelukuluku
Kuyaziwa nangegama le-Arabian Gulf futhi iyigebe lasolwandle elikhulu kodwa elingajulile. Itholakala phakathi kwe-Iran neNhlonhlo yase-Arabia. Uma sihlaziya ngokubuka komhlaba, siyabona ukuthi kunjalo umkhathi woLwandlekazi lwaseNdiya. Ibeka umkhawulo enyakatho, enyakatho-mpumalanga nasempumalanga ne-Iran; eningizimu-mpumalanga naseningizimu yi-Oman ne-United Arab Emirates; eningizimu-ntshonalanga nasentshonalanga neQatar, Bahrain neSaudi Arabia; nasenyakatho-ntshonalanga yiKuwait ne-Iraq.
Ukwakheka kwaleli gebe elibucayi ngesikhathi sokugcina seqhwa nokuqala kweHolocene. Ngaleso sikhathi, leli gebe laliyisiphephelo semvelo kubantu bokuqala ababengahlala lapho ukuze bazivikele ekushintshashintsheni kwesimo sezulu. Futhi kwaba ukuthi okwesikhashana esithile kwaba indawo ebanzi evundile eyayinesigodi namaxhaphozi. Kulesi sigodi imifula yesigodi sasePheresiya yathululeka.
Izindawo zokuhlala ezindala kunazo zonke ezabantu zingezizizwe eziyimizulane. Kwenzeka ekupheleni kwekhulu lesi-XNUMX BC futhi le ndawo yonke yaqala ukulawulwa yimpucuko yaseDilmun. Isikhathi esithile indawo ebaluleke kunazo zonke eyayibusa kwakunguGerrha futhi kwezinye izikhathi kwaba nezimpi ezazilimaza impela. Ugu lwaluphethwe yimibuso yezinyamazane yingakho ibizwa ngePersian Gulf.
Amadolobha kanye namazwe ePersian Gulf
Ake sibone ukuthi yimaphi amazwe nemizi evelele kule ndawo. Ngokuqondene namazwe, la mazwe alandelayo ayingxenye yePersian Gulf: I-Turkey, iSyria, iJordani, i-Iraq, i-Kuwait, iSaudi Arabia, iBahrain, i-United Arab Emirates, i-Yemen, i-Iran ne-Oman.
Amadolobha amaningi anezici ezithile ngoba aveza amafomu e-geological ahlukile futhi iningi lawo linamadiphozi amakhulu kawoyela. ISaudi Arabia iyisizinda solimi nakuwo wonke amapulazi ama-Arab akhona kule ndawo. Kubuye kubhekwe njengenye yezindawo ezibhekele ukukhiqizwa kukawoyela okukhulu kunakho konke emhlabeni.
I-Qatar isekela umnotho wayo omkhulu ekuhlanganiseni ukudoba kanye namaparele. Lokhu kuze kwaba yilapho bethola izinkambu ezinkulu zikawoyela ezikhona kulezi zindawo. Lapho sebethole imikhakha kawoyela, bakwenza lokhu kwaba umthombo omkhulu wezimali ezweni.
Ngakolunye uhlangothi, sinamazwe afana neKuwait anomnotho ocebile noma izinkambu zikawoyela ezinamandla emiphongolo kawoyela engaba yizigidi eziyizinkulungwane ezingama-94. Lokhu kunekhwalithi njengendawo yokugcina amandla futhi njengomthombo wemali ezweni. Enye indawo eyaziwa njengeBahrain Kungumnotho okwazile ukwenza isimanje ngenxa yokusebenza kwawo ngokususelwa ku-oyela. Isikhathi sesimanje sivunyelwe zombili nabantu abahlala kulezi zindawo ngenxa yokwanda kwemali engenayo evela ekuthengisweni kukawoyela.
I-United Arab Emirates, i-Iran, i-Iraq, i-Oman inezinkundla zamafutha okungumthombo wezomnotho oyisisekelo futhi omkhulu.
Izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo ePersian Gulf
Njengakule bhulogi okuthandayo indawo yingxenye yemvelo, sizogxila ezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo ePersian Gulf. Sizokwahlukanisa lokhu kuhlukahluka kube izimbali nezilwane.
Impilo kulezi zindawo yehluke kakhulu ngenxa yokusatshalaliswa okuphezulu kwendawo enakho. Ezinye zezinhlobo zezilwane ezibaluleke kakhulu ezindaweni zasolwandle zitholakale ePersian Gulf. Kumele futhi kuqashelwe ukuthi amanye amafayela we- izinhlobo ezinhle kakhulu zezimila nezilwane zasolwandle sezisengcupheni yokuqothulwa noma ube sengozini enkulu yemvelo. Lokhu kungenxa yemisebenzi yezomnotho etholakala ekusetshenzisweni kukawoyela.
Kusukela kumakhorali kuya kuma-dugongs, le ndawo inokuhlukahluka okukhulu kwezilwane njengoba inezindawo eziningi zokuhlala zezinhlobo eziningi ezincikene ngokusinda kwazo. Izilwane zasendle zisengozini ngenxa yezimo zomhlaba ezifana nobudedengu bendawo nobesifunda. Iningi lokungcola okukhiqizwa yimisebenzi kawoyela livela emikhunjini. Ukukhiqizwa kokungcola kwabantu kubalwa njengomthombo wesibili ovame kakhulu wokungcola. Inkinga enkulu yalokhu kungcoliswa kungukucekelwa phansi nokwehlukaniswa kwezindawo zemvelo zezinhlobo ezahlukene zezimbali nezilwane.
Ngokuqondene nezimbali, ayinabisi kakhulu kwezinye izingxenye kepha ihlukile futhi iyajabula. Lokhu kusho ukuthi kunezinhlobo eziningi zezinto eziphilayo kule ndawo. Inkinga enkulu ethinta izimbali ukuchitheka kukawoyela njalo. Ngenxa yalokhu kungcoliswa, izinhlekelele kanye nokuwohloka kwemvelo kanye nezindawo ezixhasa uhlaza zenzeka.
Ukubaluleka kanye nelukuluku
Njengoba kungalindelwa, ukubaluleka okukhulu kwezomnotho kwePersian Gulf kungenxa yezindawo zokugcina uwoyela kule ndawo. Ngenxa yalezi zindawo zokugcina uwoyela, kube nentuthuko engakaze ibonwe kwezomnotho nakubantu. Kufanele kukhunjulwe ukuthi amazwe aphethwe yiPersian Gulf azungeze ama-40% wokuthunyelwa kukawoyela ongahluziwe emhlabeni kanye nango-15% wemikhiqizo ephethiloli ephumayo.
Ngokuqondene nesifiso, sinokunye okulandelayo:
Ngenxa yokusebenzisa uwoyela ngokungalawuleki, Ukukhishwa kwegesi lokushisa kuyanda futhi, uma kungenzeki kwehle ngasekupheleni kwekhulu leminyaka, ukwanda kwamazinga okushisa kule ndawo ukuze igebe liba yindawo cishe engahlali muntu.
EPersian Gulf kunendawo ebhekwa njengeyifudumele ngokwasolwandle futhi ekwazi ukufinyelela emazingeni okushisa e- kuze kufike kuma-degree angama-64 ehlobo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngePersian Gulf nezimpawu zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » I-Persian Gulf